ဝင်းစည်သူ - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁၂-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၈"။-၁၉၄၇)ဩဂုတ် ၁၂၊ ၁၉၄၇
ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၁၉၉၄(၁၉၉၄-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-0၅) (အသက် ၄၆)
စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ (B.A. Ag)
ဝင်းစည်သူ (၁၉၄၇–၁၉၉၄) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ လမ်း ၁ဝ ၌ အဖ ဦးတင်ထွေး၊ အမိ ဒေါ်လှသင်း တို့က ၁၉၄၇ ခု ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း လေးယောက် အနက် ဒုတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးစိန်မောင်ဝင်း ဖြစ်သည်။
လေးနှစ်သား အရွယ်တွင် ၁၅ လမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ခဲ့သည်။ မန္တလေး အထက (၁) တွင် ကျောင်းနေခဲ့သည်။ ဒသမတန်း ကျောင်းသား ဘဝတွင် နေ့မှာ အထက (၁) တွင် တက်၍၊ ညမှာ နေပြည်တော် ညကျောင်းတွင် တက်ပြီး ပညာ ရှာခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် (၁၉၆၅ - ၇ဝ) တွင် တက်ရောက် သင်ယူ ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ် အထိ စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် မြန်မာ စာပေ အသင်း အတွင်းရေးမှူး တာဝန် ယူခဲ့သည်။ ၁၉၇ဝ တွင် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ (B.A. Ag) ရရှိ ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ဌာနတွင် နေ့စား လပေး ၃ ကျပ် ၁၅ ပြား အလုပ်သင် ဘဝ (၁၉၇၁ - ၇၆) တွင် ငါးနှစ်ကြာ ဖြတ်သန်း ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အလုပ်မှ ထွက်ကာ ဇာတ်သဘင် စင်တင် ပြဇာတ်ရေး ဆရာ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ သရဖူ မြန်မာစာ သင်တန်း ဖွင့်၍ မြန်မာစာ ကျူရှင် ဆရာ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဝတ္ထုတိုရေး ဆရာ အဖြစ် လည်းကောင်း ရပ်တည် ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သည် အထိ မြန်မာစာ သင်၍ ဝတ္ထုတို ရေးသား သွားခဲ့သည်။
၁၉၆၃ ခု မန္တလေး အထက (၁) ၁ဝ တန်း ကျောင်းသား ဘဝတွင်ပင် စာ စတင် ရေးခဲ့သည်။ မန္တလေးထုတ် "ပြုံး" နှင့် "ထူး"၊ ရန်ကုန်ထုတ် "အကယ်ဒမီ" စာစောင် များတွင် ကဗျာ၊ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသား ခဲ့သည်။ အမှတ် (၁) ကျောင်းသား များရဲ့ သူငယ်ချင်း တစု ကဗျာများ၊ ၁၉၆၅ တွင် ခံပန်းခိုင် ကဗျာများ နှင့် မိုးသောက်ကြယ် ကဗျာများ စုပေါင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ (နောက်ဆုံး နှစ်မှ အပ) တွင် ရှုထောင့် ဂျာနယ်၊ မြဝတီ၊ ငွေတာရီ၊ ရှုမဝ တို့၌ ကဗျာများ၊ တက္ကသိုလ် ကဏ္ဍ စာတမ်းများ ရေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကလောင် အမည်မှာ 'ငြိမ်းအောင်' ဖြစ်သည်။ 'ဝင်းစည်သူ' ကလောင် အမည်ဖြင့် ရေးသည့် ပထမဆုံး ဝတ္ထုတိုမှာ ၁၉၈၆ ခု မေလထုတ် ရုပ်ရှင် အောင်လံ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါဝင်သည့် 'သန်းပေါင်းသုံးဆယ် ကျော်ထဲက ကျွန်တော်' ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင် အောင်လံ၊ သဘင်၊ မဟေသီ၊ ကလျာ၊ မိုးဝေ၊ ရုပ်ရှင် အမြုတေ၊ ရင်ခုန်ပွင့်၊ အိမ်မက်ဖူး၊ ရနံ့သစ်၊ ကလျာ၊ သဘင် အောင်လံ၊ ရုပ်ရှင် တေးကဗျာ၊ ရွှေဝတ်ရည်၊ ရွှေအမြုတေ၊ စံပယ်ဖြူ၊ ပေဖူးလွှာ၊ ချယ်ရီ၊ ဓန၊ ရွှေဝတ်မှုန်၊ မိုးဂျာနယ်၊ မြားနတ်မောင် စသည် တို့တွင် ဝတ္ထုတို ၇ဝ ခန့် ရေးသားခဲ့သည်။ ဝသုန္ဓရေ ဝတ္ထုတိုစု (၁၉၈၈)၊ အောင်ပင်လယ် လေပြည် လေညင်း ဝတ္ထုတို (၁၉၉ဝ)၊ ဗီတာမင် ၁၃ ဝတ္ထုတိုစု (၁၉၉၁) စသည့် ဝတ္ထုတို စုပေါင်း စာအုပ် များတွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။ ဆယ့်နှစ်ပွဲ ဈေးသည် ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၉ဝ) နှင့် (၉ဝ) ဝန်းကျင် ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၉၂) မှာ ထင်ရှားသည်။ ၁၉၉၄ ဇန်နဝါရီထုတ် ပန်းဝေသီ မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသည့် 'ဝယ်တယ်' ဝတ္ထုတိုသည် နောက်ဆုံး လက်ရာပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၇၁ တွင်ဇာတ် သဘင် စင်တင် ပြဇာတ် များကို စတင် ရေးခဲ့သည်။ မြို့တော် ဇာတ်တွင် (၁) ရွှေတံခါးကြီး ဖွင့်ပါဆို၊ (၂) ဆီမီးထွန်းချိန် ပန်းပျိုးချိန်၊ (၃) အရှုပ်တော်ပုံ စာနှစ်စောင်၊ (၄) မြန်မာ လာသောလမ်း၊ (၅) ပုဂံမှာမွေး ပုဂံသွေး၊ (၆) ပွဲပြန်ကြော့ကြော့၊ (၇) ရွှေမြင်းမိုရ်တတောင်လုံးကို၊ (၈) ရွှေဆယ်တင်းနဲ့ မလဲနိုင်၊ (၉) ယမုံနာ ပြောသော ပုံပြင်။ မန္တလေး သိန်းဇော် ဇာတ်တွင် (၁) ချစ်သူကောင်းတို့ နှလုံးသား၊ (၂) ကန္တာရ အချစ်၊ (၃) ရေလို အေးပါစေ၊ (၄) ကျွန်တော့်ကို ပြန်မွေးပေးပါ အမေ၊ (၅) ချစ်ဝတ်ရည် ဘယ်မခန်း၊ (၆) ချစ်ပြုံး နှင်းဆီ၊ (၇) မြည်းတကောင်နှင့် သားအဖ နှစ်ယောက်၊ (၈) ဆေးရောင်စုံ မြင်ကွင်းကျယ် မှတ်တိုင်၊ (၉) မိုးပေါ်ကတိမ် တိမ်ပေါ်ကမိုး၊ (၁ဝ) ပန်းသလား မေပျို၊ (၁၁) မန္တလေးကို လိုက်ခဲ့မလား၊ (၁၂) သမုဒယ လွင်ပြင်၊ (၁၃) ဖားတလုံး ခေါင်းကျား၊ (၁၄) မြင်းမိုရ်ထက်မှာ သာတဲ့လ၊ (၁၅) မြားကျိုးတဲ့ မုဆိုး၊ (၁၆) နေထဲက လူ။ မိုးဝင်း ဇာတ်တွင် ပြိုင်စံပေါ်စရာ မမြင်။ စုစုပေါင်း ၂၆ ပုဒ် ရေးသား ညွှန်ကြား တင်ဆက် ခဲ့သည်။
၁၉၉၄ ခု ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။
↑ လူထု ဒေါ်အမာ. လွမ်းသူ့စာ, ၃၃၇ - ၃၃၉။
↑ နေထွတ်. မန္တလေး အဘိဓာန်, ၃၃။
↑ ဟိန်းလတ် (၁၉၉ဝ). "ဝင်းစည်သူ အင်တာဗျူး". မဟေသီ.
↑ ဝင်းစည်သူ (ဇူလိုင် ၁၉၉၂). ၉ဝ ဝန်းကျင် ဝတ္ထုတိုများ, ၁၈၅ - ၁၉ဝ။
↑ မောင်ခေတ်ထွန်း (စက်တင်ဘာ ၁၉၉၅). "မြန်မာ စာဆိုများ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ပုံလွှာ (၃)". စတိုင်သစ် မဂ္ဂဇင်း.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝင်းစည်သူ&oldid=460067" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။